China CNC Mihodina ny orinasa sy ny mpanamboatra | firaka
1.all-manodidina 360 famokarana tsipika fanapahana vondrona fijanonana workflow, mamela mandeha ho azy fantsom-pamokarana sakafo, mandeha ho azy fanapahana, mandeha ho azy fanapahana, mandeha ho azy fandefasana asa.
2.Ny fampiasana ny rafi-pandaminana KASRY Nesting ho fitaovana fanaovana fandaharana lehibe, ny sehatry ny programa lozisialy AUTOCAD fototra, tsotra, sary ary intuitive, manankarena endrika, afaka manatsara ny fahombiazan'ny asa.
3.High-end telo-dimensional malefaka fanapahana fampiharana, hanatratra bevel fanapahana asa, ny fantsona sy ny fanilo mampiasa ny servo fametrahana toerana asa.
Afaka manapaka vy vy, vy tsy misy fangarony, varahina, aliminioma sy fantsona hafa ary mombamomba azy, toy ny: ny fantsona, fantsona, fantsom-boribory, fantsom-bokatra, H-beam, I-beam, zoro, fantsona, sns. amin'ny karazana fantsom-pifanarahana profil pipa isan-karazany, indostrian'ny fanamboarana sambo, rafitry ny tambajotra, vy, injeniera an-dranomasina, fantsom-pitrandrahana solika ary indostria hafa
Ny CNC Turning dia fomba be pitsiny sy feno tsipiriany amin'ny famoronana ampahany sy singa manokana ampiasana latina. Computer Numerical Control (CNC) fihodinana dia tena mahay, Precision Engineering dingana.
Inona avy ireo faritra mila mihodina amin'ny CNC?
Tsy misy ny fanontaniana fa ny CNC Milling sy ny CNC Turning dia dingana tena samihafa izay hiafara amin'ny valiny hafa tanteraka. Ny Centres CNC dia mety amin'ny volavolan-dalàna ary indrindra ny prototypes sy ny faritra izay eo ambanin'ny 2.5 "raha toa ka afaka miasa amin'ireo faritra mihoatra ny 2.5" OD ny foibe fihodinana, mila jerena tsirairay izy ireo ary miankina amin'ny habetsany amin'ireo ampahany novokarina, dia mety hisy fiatraikany ambony amin'ny vidin'ny famokarana. Ary koa, raha latsaky ny 1.25 "OD ny ampahany, ny fanodinana dia mety tsy ho ny safidy amin'ny famokarana an'io ampahany io. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa ny singa lehibe indrindra mamaritra izay mety ho vokarin'ny CNC Turning dia ny habetsany. Ny avo kokoa ny habetsaky ny tsy dia mifanentana amin'ilay ampahany dia mety novokarina tamin'ny fihodinana.
Hihaona amin'ireo masininay
Mazak tokana spindle mihodina haingana lathe CNC
Hihaona amin'ny fahaizantsika
Fandeferana: ny fahamoran'ny boribory sy ny concentricity dia azo tratrarina amin'ny +/- 0.005mm
Ny fahasarotan'ny tany dia azo tratrarina Ra0.4
Haben'ny habe: ny savaivon'ny bara boribory akora manomboka amin'ny 1mm ka hatramin'ny 300m
Fitaovana: Aluminium, Steel, Stainless vy, Titanium, varahina, sns
OEM / ODM dia raisina an-tanan-droa
Misy santionany alohan'ny famokarana betsaka
Serivisy fanampiny:Machining CNC, Mihodina ny CNC, Fametahana metaly, Sheet Metal, Vita, Fitaovana,, sns
Teo aloha: Fikosoham-bary
Manaraka: Fitaovana varahina